Amaokwu Bible maka olileanya n’oge ihe siri ike nke mmadụ niile ga-amatarịrị
Paolo Tescione	Edere ya Ọgọstụ 6, 2020 Ọgọstụ 7, 2020
Anyị anakọtala amaokwu okwukwe dị na amaokwu Baịbụl kachasị amasị anyị gbasara ịtụkwasị Chineke obi na ịchọta olileanya maka ọnọdụ ndị na-eme ka anyị sụọ ngọngọ. Chineke na-agwa anyị na anyị ga-enwe nsogbu n ’ụwa a, anyị ga-ezute oge a na-amaghị ama na nsogbu. Agbanyeghị, ọ na - ekwe nkwa na anyị nwere mmeri site n'okwukwe anyị n'ihi na Jizọs Kraịst emeriela ụwa. Ọ bụrụ na ị na-eche oge siri ike na oge a na-ejighi n'aka, enwere ike ịgba gị ume ka ọ sie ike ịmara na ị bụ onye mmeri! Jiri akụkụ Akwụkwọ Nsọ okwukwe dị n'okpuru bulie mmụọ gị ma soro ndị ọzọ kerịta ya site n'ịjụ ịdị mma Chineke.
Ekpere maka okwukwe na ike
Nna nke Eluigwe, biko mee ka obi anyị sie ike ma chetakwara anyị ka anyị gbarịta onwe anyị ume mgbe nsogbu nke ndụ malitere ịfụ anyị ọnụ. Biko chebe obi anyị pụọ na nkụda mmụọ. Nye anyi ike ibili kwa ubochi ma luso ọgụ nile na acho igbali anyi ike. Amen.
Ka amaokwu Baịbụl ndị a mee ka okwukwe gị dịkwuo elu ma wusie ntụkwasị obi gị na Chineke ike na iduzi gị. Chọpụta akụkụ Akwụkwọ Nsọ kacha mma iji buo maka ntụgharị uche kwa ụbọchị na nchịkọta okwu ndị dị n'akụkụ Akwụkwọ Nsọ!
Amaokwu Baịbụl banyere okwukwe
Jisus zara, si ya, N'ezie, n'ezie, asim i, ọ buru na i nwe okwukwe, obi esighi gi ike, ọ bughi nání ime ihe emere n'osisi fig, gi onwe-gi puru isi ugwu a, Je, tubà onwe-gi n'oké osimiri. ~ Matiu 21:21
Okwukwe si n’ite na nti site n’okwu Kraist. ~ Ndị Rom 10:17
Na enweghị okwukwe ọ gaghị ekwe omume ime ihe na-atọ ya ụtọ, n’ihi na onye ọ bụla nke bịaruru Chineke nso ga-ekwere na ọ dị, na ọ na-akwụghachikwa ndị na-achọ ya ụgwọ ọrụ. ~ Ndị Hibru 11: 6
Okwukwe bu ntukwasi obi nke ihe an raje anya, nkwenye nke ihe anaghi ahu anya. ~ Ndị Hibru 11: 1
Jizọs zara ha, sị: “Nweenụ okwukwe na Chineke. N’eziokwu, ana m asị unu, onye ọ bụla nke sịrị ugwu a,“ Were tụba n’oké osimiri ”na obi abụọ adịghị ya n’obi, mana o kwenyere na ihe ọ na-ekwu ga-eme, ọ ga-eme ya. ya. Ya mere a sị m gị, ihe ọbụla ị rịọrọ n’ekpere, kwere na inwetara ya ma ọ ga-abụ nke gị. ~ Mak 11: 22-24
Amaokwu Baịbụl maka ịtụkwasị Chineke obi
Jiri obi gị dum tụkwasị Jehova obi, adaberekwala ná nghọta gị. Mara ya n'ụzọ gị niile ọ ga - eme ka ụzọ gị kwụ ọtọ. ~ Ilu 3: 5-6
Jehova bu ikem na ọta; Ọ bụ ya ka m tụkwasịrị obi, enyekwara m aka; Obi m na-a rejoụrị ọ andụ ma jiri abụ m na-ekele ya. ~ Abụ Ọma 28: 7
Ka Chineke nke olile anya mejue gi obi uto na udo niile n'okwukwe, ka ike nke Mmuo Nso mee ka i nwekwuo olile-anya. ~ Ndị Rom 15:13
Idu du, m mara na Mu onwem bu Chineke, ewe bulie m elu n’etiti mba nile, eweliem elu elu uwa. - Abụ Ọma 46:10
Amaokwu Baịbụl iji gbaa okwukwe ume
Nweenụ ibe unu ume ma wulirita ibe unu elu dika unu na eme. ~ 1 Ndị Tesalonaịka 5:11
Onye agọziri agọzi ka Ọ bụ Chineke na Nna nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst! Dika obi ebere ya si di, o mere ka amuru anyi ozo olile anya di ndu site na nbilite n’onwu nke Jisos Kraist site na ndi nwuru anwu ~ 1 Peter 1: 3
Ekwela ka mkparịta ụka rụrụ arụ si n’ọnụ gị pụta, kama ọ bụ naanị ihe dị mma iji wuo, dabere n’oge a, nke ahụ nwere ike inye ndị na-ege ntị amara. ~ Ndị Efesọs 4:29
A mara m atụmatụ dị n’arụ gị, ka Onye-nwe kwuru, atụmatụ maka ọdịmma ọ bụghị maka ihe ọjọọ, iji nye gị ọdịnihu na olile anya. ~ Jeremaịa 29:11
Ka anyị tụleekwa ka anyị si bulita ibe anyị ihunanya na ezi ọrụ, ghara ileghara nzukọta anya, ka ụfọdụ na-eme, kama na-agbarịta ibe anyị ume, ma karie ka ị na-ahụ ụbọchị ahụ. ~ Ndị Hibru 10: 24-25
Amaokwu Baịbụl maka olileanya
Inụrịa ọ inụ na olile-anya, nwee ogologo ntachi obi, nọgidesie ike n’ekpere. ~ Ndị Rom 12:12
Ma ndi n waitchere Jehova g willme ka ike-ha di ọhu; ha g withbili dika nku dika ugo; Ha ga-agba ọsọ, ike agaghị agwụkwa ha; ha ga-eje ije ma ọ gaghị agabiga. ~ Aisaia 40:31
N’ihi na ihe niile edere n’oge gara aga ka edere maka ntuziaka anyị, na site na nguzosi ike na agbamume nke Akwụkwọ Nsọ ka anyị nwee olile-anya. ~ Ndị Rom 15: 4
N'ihi na a zoputara anyi. Ugbu a olile-anya nke a na-ahụ anya abụghị olileanya. Anie ke enye odori enyịn ke se enye okụtde? Ma ọ bụrụ n’olileanya n’ihe anyị anaghị ahụ, anyị na-echere ya. ~ Ndị Rom 8: 24-25
Amaokwu si na Baịbụl iji mee ka okwukwe sie ike
Nke kachasị, ị ga-aghotarị na amụma ọ bụla nke Akwụkwọ Nsọ esiteghị na nkọwapụta nke ihe onye amụma. N'ihi na amuma esiteghi n'echiche mmadu, kama ndi amuma kwuru okwu si na Chineke mgbe Mo Nso buru ha. ~ 2 Peter 1: 20-21
Mgbe Mọ nke ezi-okwu biara, Ọ gha iduzi unu n’ezi-okwu nile, n’ihi na ọ gagh’eji ike ya kwuo okwu, kama ihe ọ bụla ọ ga-anụ, kwupụtara ma kọọrọ gị ihe gaje ịbịa. ~ Jọn 16:13
Ndi m hụrụ n’anya, ekwenyela na mmụọ niile, mana nwalee mmụọ ahụ ka ọ mara ma ha sitere na Chineke, dịka ọtụtụ ndị amụma ụgha abanyewo n’ụwa. ~ 1 John 4: 1
Akwụkwọ nsọ nile si na Chineke pụta, ọ bakwara uru iji zie ihe, maka ịdọ aka na ntị, maka idozi ya na inye ya ọzụzụ n’ezi omume, ka onye nke Chineke wee nwee ike tozuru oke, doziere maka ezi ọrụ ọ bụla. ~ 2 Timothy 3: 16-17
Amaokwu Baịbụl maka oge nsogbu
Ma ọ buru na amam-ihe kọrọ onye ọ bula n’ime unu, riọ Chineke, Onye nlynye ndi nile n’a withoutughi, o ghaghi enye gi. ~ Jemes 1: 5
Atụla egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; enwela nkụda mmụọ, n’ihi na abụ m Chineke gị; M ga-agba gị ume, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri m kwagide gị. ~ Aisaia 41:10
Echegbula onwe gị banyere ihe ọ bụla, kama n’ihe niile ị na-eme ka Chineke mara ihe ị na-arịọ n’ekpere na ịrịọsi arịrịọ ike ya na inye ekele. Udo nke Chineke, nke kachasi uche nile, chebe obi na uche n’ime Kraist Jisos n’ikpeazu, umu-nna, ihe obula bu eziokwu, ihe obula di nma, ihe obula di ocha, ihe obula di ọcha, ihe obula mara nma. , ihe ọ bụla kwesịrị ịja mma, ọ bụrụ na ọ dị mma, ma ọ bụrụ na ọ dị ihe kwesịrị ito, chee echiche banyere ihe ndị a. ~ Ndị Filipaị 4: 6-8
Gịnịzi ka anyị ga-ekwu banyere ihe ndị a? Ọ bụrụ na Chineke dịịrị anyị, ònye ga-emegide anyị? ~ Ndị Rom 8:31
N'ihi na ekwerem na ekwesighi ka atughari ahuhu nile nke oge a dika otuto aga ekpughere anyi. ~ Ndị Rom 8:18
← Na post gara aga Gara aga post:Nkwenye nye Madonna nke 6 Ọgọst 2020 iji nweta ekele
Ọzọ Post → Post ozo:Kadinal ndị Lebanon: "Churchka nwere nnukwu ọrụ" mgbe ihe mgbawa Beirut gasịrị